အခဈြရေးထကျ အလုပျကိုပိုဦးစားပေးရတဲ့ အကွောငျးကို ပွောပွလာတဲ့ Gong Hyo Jin | News Bar Myanmar
အခဈြရေးထကျ အလုပျကိုပိုဦးစားပေးရတဲ့ အကွောငျးကို ပွောပွလာတဲ့ Gong Hyo Jin
House of wheels ဆိုတဲ့ reality show မှာ မငျးသမီး Gong Hyo Jin ဟာ guest (ဧညျ့သညျ) အဖွဈပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ House of wheels ကတော့ Yeo Jin Goo, Kim Hee-Won နှငျ့ Sung Dong ll တို့အဓိက members အဖွဈပါဝငျသော အစီအစဉျတဈခုပါ။
Gong Hyo Jin ဟာ ဇူလိုငျလ ၂ရကျနကေ့ထုတျလှငျတဲ့ အပိုငျးသဈမှာ အဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့အတူ စကားလကျဆုံကွခဲ့ပါတယျ။ Gong Hyo Jin ကသူမရဲ့ အသကျ ၂ဝကြျောအခြိနျတုနျးက အကွောငျးအရာမြားကို ဖောကျသညျခခြဲ့ပါတယျ။
” အသကျ ၂ဝကြျောလောကျတုနျးကတော့ အခဈြဟာအရာရာလို့ ထငျခဲ့တာပါ။ အတှအေ့ကွုံရှိတဲ့ အမတှကေ အမွဲတမျး အခဈြမှာပဲ အခြိနျကုနျမခံဖို့၊အလုပျအပျေါမှာပဲ အားရုံစိုကျထားဖို့ အကွံပေးရငျတောငျ နားမလညျခဲ့ဘူး။
ဘာဖွဈလို့လညျးဆိုတော့ အဲ့အရှယျတုနျးက အခဈြကဘဝကွီး ဖွဈခဲ့တာကို” လို့ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ “ဒါပမေဲ့ အခုအဲ့အခြိနျတှကေို ပွနျကွညျ့လိုကျရငျ အမတှေ ပွောခဲ့တာ တကယျမှနျတယျ။ အလုပျတှကွေိုးစားပွီ ကိုယျ့ကိုကိုယျ အရငျပွညျ့စုံအောငျလုပျထားမှ အခဈြတှအေမြားကွီး ကိုယျ့ဆီရောကျလာလိမျ့မယျ။
အဓိကကတော့ ကိုယျ့ဖကျကလညျး perfect ဖွဈနအေောငျ အရငျလုပျထားရမယျဆိုတာပဲ”… Yeo Jin Goo ကလညျးသူ့ရဲ့ အိမျထောငျရေးအပျေါအမွငျကို ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ “ကြှနျတျောကတော့ အိမျထောငျတဈခုကို စောစောစီးစီးထူထောငျခငျြတယျ။
အဲ့လို့မိသားစုတဈစု ပြျောရှငျနတောမွငျရငျ ကြှနျတျောအိမျထောငျပွုခငျြတဲ့ စိတျပျေါတယျ” လို့ပွောပွခဲ့ပါတယျ။” ကြှနျတေျာ့ဘဝမှာ အမွဲတမျးကြှနျတေျာ့ဘကျက crush ခဲ့ရတာခညျြးပဲ။ တဈခါမှ တရားဝငျခဈြသူ မရှိခဲ့ဘူး” ဟုပွောပွကာ အားလုံးကိုအံသွစခေဲ့ပါတယျ။
ဒီပုံစံအတိုငျးဆိုရငျတော့ Gong Hyo Jin တဈယောကျ အိမျထောငျပွုတာ နောကျကမြယျလို့ ထငျမိတယျနျော။ ပရိတျသတျကွီးရော ဘယျဟာကို အရငျဦးစားပေးသငျ့တယျလို့ ထငျပါသလဲ။ အိမျထောငျပွုတာကိုအရငျလား၊ မိမိကိုယျကိုပွညျ့စုံအောငျအရငျလုပျတာလား.? ကိုယျ့ရဲ့ ထငျမွငျခကျြတှကေိုလညျး comment မှာ ရေးသားနိုငျတယျနျော…။
(Zawgyi) အချစ်ရေးထက် အလုပ်ကိုပိုဦးစားပေးရတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ Gong Hyo Jin
House of wheels ဆိုတဲ့ reality show မှာ မင်းသမီး Gong Hyo Jin ဟာ guest (ဧည့်သည်) အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ House of wheels ကတော့ Yeo Jin Goo, Kim Hee-Won နှင့် Sung Dong ll တို့အဓိက members အဖြစ်ပါဝင်သော အစီအစဉ်တစ်ခုပါ။
Gong Hyo Jin ဟာ ဇူလိုင်လ ၂ရက်နေ့ကထုတ်လွှင်တဲ့ အပိုင်းသစ်မှာ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ စကားလက်ဆုံကြခဲ့ပါတယ်။ Gong Hyo Jin ကသူမရဲ့ အသက် ၂ဝကျော်အချိန်တုန်းက အကြောင်းအရာများကို ဖောက်သည်ချခဲ့ပါတယ်။
” အသက် ၂ဝကျော်လောက်တုန်းကတော့ အချစ်ဟာအရာရာလို့ ထင်ခဲ့တာပါ။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ အမတွေက အမြဲတမ်း အချစ်မှာပဲ အချိန်ကုန်မခံဖို့၊အလုပ်အပေါ်မှာပဲ အားရုံစိုက်ထားဖို့ အကြံပေးရင်တောင် နားမလည်ခဲ့ဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အဲ့အရွယ်တုန်းက အချစ်ကဘဝကြီး ဖြစ်ခဲ့တာကို” လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ “ဒါပေမဲ့ အခုအဲ့အချိန်တွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် အမတွေ ပြောခဲ့တာ တကယ်မှန်တယ်။ အလုပ်တွေကြိုးစားပြီ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အရင်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ထားမှ အချစ်တွေအများကြီး ကိုယ့်ဆီရောက်လာလိမ့်မယ်။
အဓိကကတော့ ကိုယ့်ဖက်ကလည်း perfect ဖြစ်နေအောင် အရင်လုပ်ထားရမယ်ဆိုတာပဲ”… Yeo Jin Goo ကလည်းသူ့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအပေါ်အမြင်ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်တော်ကတော့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို စောစောစီးစီးထူထောင်ချင်တယ်။
အဲ့လို့မိသားစုတစ်စု ပျော်ရွှင်နေတာမြင်ရင် ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ပြုချင်တဲ့ စိတ်ပေါ်တယ်” လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။” ကျွန်တော့်ဘဝမှာ အမြဲတမ်းကျွန်တော့်ဘက်က crush ခဲ့ရတာချည်းပဲ။ တစ်ခါမှ တရားဝင်ချစ်သူ မရှိခဲ့ဘူး” ဟုပြောပြကာ အားလုံးကိုအံသြစေခဲ့ပါတယ်။
ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်တော့ Gong Hyo Jin တစ်ယောက် အိမ်ထောင်ပြုတာ နောက်ကျမယ်လို့ ထင်မိတယ်နော်။ ပရိတ်သတ်ကြီးရော ဘယ်ဟာကို အရင်ဦးစားပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ အိမ်ထောင်ပြုတာကိုအရင်လား၊ မိမိကိုယ်ကိုပြည့်စုံအောင်အရင်လုပ်တာလား.? ကိုယ့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း comment မှာ ရေးသားနိုင်တယ်နော်…။
Next ဇူလိုငျလ ၆ ရကျနမှေ့ာ စတငျစဈမှုထမျးနပွေီဖွဈလို့ လှမျးနရေဦးမယျ့ Woo Do Hwan »
Previous « BLACKPINK Jennie ရဲ့ Instagram live မှာ ပါဝငျခဲ့တဲ့ Red Velvet Yeri